လေးသောင်းကိစ္စမှာ မရိုးမသားလုပ်နေတဲ့ အုပ်ကြီးတွေကို ပြန်မရွေးမိဖို့ ပြည်သူတွေ လုပ်ရမယ့်အလုပ် – Myanmar
လေးသောင်းကိစ္စမှာ မရိုးမသားလုပ်နေတဲ့ အုပ်ကြီးတွေကို ပြန်မရွေးမိဖို့ ပြည်သူတွေ လုပ်ရမယ့်အလုပ်
အခုမှ အပြစ်ပြောမနေကြနဲ့…. ရပ်ကွက်တစ်ခုမှာ ဆယ်အိမ်မှူး ရာအိမ်မှူးတွေရွေးဖို့ စည်းဝေးတက်ကြပါဟ ဆို…. ဘယ်သူမှ ဟုတ်ဟုတ်ဟတ်ဟတ်မလာကြဘူး ။ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေနေကြတာဘဲ။ ကိုယ်လုပ်မှကိုယ်စားရတာ ဆိုတဲ့ အပြောကရှိသေး
အဲ့ဒီတော့ လာတဲ့သူတွေထဲက ဆယ်အိမ်မှူး ရာအိမ်မှူးရွေးရရော ပြီးတော့ ရာအိမ်မှူးကနေ ဥက္ကဌ ရွေးရရော စီမံခန့်ခွဲမှုတွေအဆင်မပြေကာမှ ဥက္ကဌ ဘယ်သူတင်ထားလဲဖြစ်ကြရော ….. လမ်း အစည်းအဝေးတက်ကြပါ ဆိုတော့ ရပ်ကွက်လူကြီးတွေရွေးဖို့ဆို မဆိုင်သလိုနေ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်တင်ထားတာမဟုတ်တော့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာပြောမရ အဲ့လိုမဖြစ်ကြစေချင်ရင် ခု မကြာခင်လာတော့မယ့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေး ရွေးပွဲမှာ ပြည်သူတွေ ရပ်ရေးရွာရေးမှာ စိတ်ဝင်တစားပါဖို့လိုနေပြီ ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကို ဘယ်လို ရွေးရတယ်ဆိုတာ ဖတ်ကြည့်ပေးကြပါဦး …
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရွေးဖို့အတွက်ပဏာမ အနေနဲ့ ရပ်မိ၊ရပ်ဖ အရင်ရွေးရပါတယ်။ ရပ်မိ၊ရပ်ဖကနေ ပြည်သူ့ရှေ့မှောက် ဆယ်အိမ်မှူး၊ ရာအိမ်မှူးမှာ အစည်းအဝေးတက်လာတဲ့ သူတွေထဲက ရွေးပေးရပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာစတွေ့ပါတယ်၊ ဆယ်အိမ်မှူးက သမာသမတ် ကြပြီး၊ မျှမျှတတရှိတဲ့သူ၊ လမ်းအတွက် အများအကျိုးဆောင်တဲ့သူ၊ အရင်ရွေးပေးမှ သူက ဆယ်အိမ်ခေါင်းထဲကမှ ရာအိမ်မှူးတစ်ဦး ရွေးရပါတယ်။
ဆယ်အိမ်မှူးတွေကလည်း သူတို့ထဲက ရပ်ရွာမှာ သမာသမတ်ရှိမယ်၊ တက်ကြွတဲ့လူ၊ ကိုယ်ကျိုးမကြည့်တတ်တဲ့သူကို စိစစ်ပြန်ရွေး၊ တစ်ခါရာအိမ်မှူးထဲကမှ ရယကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို မဲဆန္ဒနဲ့ရွေးရပါတယ်။
ပြည်သူအနေနဲ့ အစည်းအဝေးတက်မှ ကိုယ့်ဆယ်အိမ်စုမှာ သူကောင်း၊ လူကောင်းကို ရွေးလို့ရမှာပါ၊ အကယ်လို့ အစည်းအဝေးမတက်ရင် တက်လာတဲ့ သူတွေထဲက ဆယ်အိမ်မှူးကိုရွေးရမှာပါ။ ကဲ သိပြီဆိုရင်တော့ မကြာခင်လာတော့မယ့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးပွဲမှာ ပါဝင်ကြပါစို့ ..